1 Makoronike 5:1-26
5 Vanakomana vaRubheni,+ dangwe raIsraeri—nokuti ndiye aiva dangwe;+ asi iye zvaakasvibisa mubhedha wababa vake,+ udangwe hwake hwakapiwa vanakomana vaJosefa+ mwanakomana waIsraeri, zvokuti aisazonyorwa sedangwe maererano nedzinza rake. 2 Nokuti Judha+ akava mukuru pakati pevanakomana vababa vake, uye mutungamiriri akabva kwaari;+ asi udangwe hwaiva hwaJosefa+— 3 vanakomana vaRubheni dangwe raIsraeri vaiva Hanoki+ naParu,+ Hezroni naKami.+ 4 Vanakomana vaJoeri vaiva mwanakomana wake Shemaya, aiva nomwanakomana ainzi Gogi, aiva nomwanakomana ainzi Shimei, 5 aiva nomwanakomana ainzi Mika, aiva nomwanakomana ainzi Reaya, aiva nomwanakomana ainzi Bhaari, 6 aiva nomwanakomana ainzi Bheyera akatapwa naTirigati-pirineseri+ mambo weAsiriya, iye aiva muchinda wevaRubheni. 7 Hama dzake maererano nemhuri dzadzo dzakanyorwa maererano nemadzinza+ adzo nevazukuru vadzo dzaiva Jeyieri, aiva mukuru, naZekariya, 8 naBhira mwanakomana waAzazi mwanakomana waShema mwanakomana waJoeri+—iye aigara muAroeri+ kusvikira kuNebho+ nokuBhaari-meyoni.+ 9 Akagarawo kumabvazuva kusvikira panopindwa napo murenje parwizi rwaYufratesi,+ nokuti zvipfuwo zvavo zvakanga zvawanda munyika yeGiriyedhi.+ 10 Mumazuva aSauro vakarwa nevaHagri,+ vakavauraya; naizvozvo vakagara mumatende avo munyika yose kumabvazuva kweGiriyedhi. 11 Vanakomana vaGadhi+ vaiva pakatarisana navo vakagara munyika yeBhashani+ kusvikira kuSareka.+ 12 Joeri ndiye aiva mukuru, achiteverwa naShafamu, naJanayi naShafati vaiva muBhashani. 13 Hama dzavo dzeimba yemadzitateguru avo dzaiva Mikaeri naMeshuramu naShebha naJorai naJakani naZiya naEbheri, vari vanomwe. 14 Ava ndivo vaiva vanakomana vaAbhihairi mwanakomana waHuri, mwanakomana waJaroa, mwanakomana waGiriyedhi, mwanakomana waMikaeri, mwanakomana waJeshishai, mwanakomana waJadho, mwanakomana waBhuzi; 15 Ahi mwanakomana waAbdhieri, mwanakomana waGuni, aiva mukuru weimba yemadzitateguru avo. 16 Vakaramba vachigara muGiriyedhi,+ muBhashani+ nomumataundi aiva pasi paro+ nomumafuro ose eSharoni kusvikira kwaanogumira. 17 Vose zvavo vakanyorwa maererano nemadzinza avo mumazuva aJotamu+ mambo waJudha nomumazuva aJerobhoamu+ mambo waIsraeri. 18 Vanakomana vaRubheni uye vaGadhi nehafu yedzinza raManase; vaya vaiva vanhu vakashinga,+ varume vaitakura nhoo nebakatwa, vaikunga uta uye vakarovedzwa kurwa, vaiva zviuru makumi mana nezvina nemazana manomwe nemakumi matanhatu vaienda kuhondo.+ 19 Vakarwa nevaHagri,+ naJeturi+ naNafishi+ naNodhabhu. 20 Vakabatsirwa kuvarwisa, zvokuti vaHagri navose vavaiva navo vakaiswa muruoko rwavo, nokuti vakashevedzera kuna Mwari kuti vabatsirwe+ mukurwa, iye akabvuma kutetererwa navo nokuti vaivimba naye.+ 21 Vakatapa zvipfuwo zvavo,+ ngamera dzavo zviuru makumi mashanu, nemakwai zviuru mazana maviri nemakumi mashanu, nembongoro zviuru zviviri, nemweya yevanhu zviuru zana.+ 22 Nokuti kwaiva nevazhinji vakanga vaurayiwa, nokuti kurwa kwacho kwakanga kuri kwaMwari wechokwadi.+ Ivo vakaramba vachigara munzvimbo yavo kusvikira panguva yavakatapwa.+ 23 Vanakomana vehafu yedzinza raManase,+ vakagara munyika yacho kubvira kuBhashani+ kusvikira kuBhaari-hemoni+ neSeniri+ nokuGomo reHemoni.+ Ivo vakava vazhinji. 24 Ava ndivo vaiva vakuru veimba yemadzitateguru avo: Eferi naIshi naErieri naAzrieri naJeremiya naHodhavhiya naJadhieri, varume vaiva vakashinga, vanhu vaiva nesimba, varume vaiva nomukurumbira, vakuru veimba yemadzitateguru avo. 25 Vakatanga kuva vasina kutendeka kuna Mwari wemadzitateguru avo, vakaita unzenza+ navanamwari+ vemarudzi enyika yacho, akanga atsakatiswa naMwari pamberi pavo. 26 Naizvozvo Mwari waIsraeri akamutsa mwoyo+ waPuri+ mambo weAsiriya+ nowaTirigati-pirineseri+ mambo weAsiriya, zvokuti akatapa+ vaRubheni nevaGadhi nehafu yedzinza raManase, akavaendesa kuHeira+ nokuHabhori nokuHara nokurwizi rwaGozani kuti varambe variko kusvikira nhasi.